မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: March 2010 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
အောင်သက်ဝိုင်း Wednesday, March 31, 2010 .နေပြည်တော်တွင် ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက ရုတ်တရက် တနာရီ ကျော်ကြာ မိုးသက် လေပြင်း ကျရောက်ခဲ့ရာ အစိုးရ ၀န်ထမ်းများကြား ထိတ်လန့်မှု ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ရကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မိုးလေ၀သက ခန့်မှန်းချက် ပေးမထားဘဲ မိုးသက်လေပြင်းများ ရုတ်တရက် ကျရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံအတွက်မကောင်းသော နိမိတ် လက္ခဏာအဖြစ် ယူဆချက်များရှိနေပြီး မကြာမီ ငလျင်ကြီး လှုပ်နိုင်သည်ဆိုသည့် သတင်းများလည်း နေပြည်တော် ၀န်ထမ်းအသိုင်းအ၀န်း တွင် ပျံ့နှံ့နေသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံရေးလောကမှာ အရှိန်အ၀ါ ကြီးမားတဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၉ ဦးတို့က မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပိုပြီး တင်းတင်းကျပ် ကျပ် ဖိအားပေးနိုင်အောင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ မူဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ခန့်ထားဖို့နဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ လက်ဝေခံ စီးပွားရေးသမားတွေကို ပိုမိုဖော်ထုတ် ဒဏ်ခတ်ဖို့အတွက် သမ္မတ အိုဘားမား (Obama) ဆီကို စာတစောင် ရေးသား တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုအခါမှာ မမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တွေကို NLD ပါတီနဲ့ သက်ဆိုင်ရာပါတီက ဖယ်ထုတ်ရမယ်လို့ အတင်းအကျပ် လုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကြောင့် ဒီကျောက်စိမ်းဥပဒေ အတိုင်း အတိအကျ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အချိန်ကျရောက်လာပြီ ဆိုပြီး သမ္မတ အိုဘားမားကို ဆီနိတ်တာတွေက တောင်းဆိုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 10:56 PM 1 comments
By Taunggyi Time
Posted by အာဇာနည် at 8:44 PM0comments
အလင်းအိမ်ရဲဘော်များက စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ထပ်မံထုတ်ဝေတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ လူ့ အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်နေတဲ့လုပ်ရပ်မျိုး မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာ မရှိပါဘူးလို ဆိုနေတဲ့ နအဖစစ်အစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်နှင့်စကားတွေ တကယ် လက်တွေ့ ကျမကျဆိုတာ——
စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ သေကွဲ ကွဲသွားကြတဲ့ မိသားစု၊ ရှင်ကွဲ ကွဲနေရတဲ့ မိသားစုတွေ၊ လူဖြစ်ရှံးရသွား တဲ့အဖြစ်တွေဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ အပြောနဲ့ လုပ်ရပ် လက်တွေ့ ကျမကျဆိုတာ——-
ဗဟုလွင်ပြင်လို့ အမည်ရှိတဲ့ကလောင်ရှင်၊ သူက ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး၊ သူရဲ့ ခံစား ချက်နှင့် ရပ်တည်ချက်၊ ပြီးတော့ သူ့ ခံယူချက်တွေနှင့် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးကိုချစ်ကြတဲ့ အင်အားစုတွေရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို ချယ်မှုန်းတင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာ တင်ကျန်ရစ်နေမဲ့ စာအုပ်ကောင်းတအုပ်ကို ကလောင်ရှင်ဖြစ်သူ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးရဲ့ သမီးလေး၊ မိဘနှစ်ပါးနှင့် ရှင်ကွဲ ခွဲခံထားရတဲ့သမီးလေး ဖြူနေခြည်မင်းယုရဲ့၃နှစ်မြောက် မွေးနေ့ မှာ အလင်းအိမ်ရဲဘော်များက ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 8:39 PM0comments
ယနေ့ချိန်ခါသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်၊ စစ်အာဏာရှင်တစ်စုနှင့် ၄င်းတို့၏ အပေါင်းအပါ တွဲဘက် လူလွန်မသားများ၏ ခြစား လိမ်ညာ ရက်စက် ယုတ်မာမှုများအား ဗမာပြည်သူလူထုများခင်မျာ အပြင်းထန်ဆုံးရင်ဆိုင်ခါးစည်းခံစားနေရသော ကာလဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ နာဂစ် မတရားအခြေခံဥပဒေ အခြေပြုကာ ကျင်းပမည်ဆိုသည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျွန်တော်တို့အင်အားစုက အယုံ အကြည်မရှိပါ။ လက်မခံပါ။ ထိုမှတစ်ဖန် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD ပါတီအား ချောင်ပိတ်ရိုက်သလို ပြုမူထားပြန်သည့် ၂၀၁၀ ပါတီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အင်အားစုမှ ပျက်ရယ်ပြုရှုံ့  ချလိုက်ပါသည်။
NLD ပါတီအနေဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့က ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည့် ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းပါ ရပ်တည်ချက်များကို မိမိတို့အရှက်၊ မိမိတို့ငဲ့ကွက်၍ ဆက်လက်လေးစားကိုင်စွဲကာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ် ရာ၌ "မတရားရွေးကောက်ပွဲအား ငါတို့မ၀င်" ဟု ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးအသံပေးနေသည့် NLD ပါတီဝင်များနှင့် တတိယအုပ်စုဝင်ဆိုသူများသည် ပါတီရပ်တည်ရေး၊ ရသလောက်ယူ-ပူးသတ်တိုက်ယူရေးကို အကြောင်းပြကာ အသံကောင်းဟစ်နေကြသော်လည်း အမှန်တကယ်မှာ ထိုသူများအနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင် များအား ဒူးထောက်အညံ့ခံ ကြောက်ရွံ့အရှုံးပေး၊ ဘက်ပြောင်းဘက်လိုက်၊ ခြံခုန်လာဘ်မျှော်နေခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by အာဇာနည် at 8:37 PM0comments
(သာသနာတော်ကို စစ်ကျွန်အဖြစ်နွံ့ နစ်မခံကြပါနဲ့)အထူး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေသည် မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ဒကာ/ဒကာမ(သို့)လူထု တရပ်လုံးအတွက် များစွာ အန္တာရယ် ရှိနေကြောင်း ထင်ရှားစွာ တွေ့ရှိရပါသည်။ ယခု အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသော အစိုးရသည် နှစ်ပေါင်း မည်မျှ ကြာအောင် တိုင်းပြည်အား ပြာ ဘဝအတိ ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာ မသိသလို ၊ လူထုကို ဖိနှိပ်ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေခြင်းကိုလည်း အရှိန်မြှင့်ချင်သည့် သဘောကို ဆောင်နေပါတယ်။ ထို့ အတူပဲ သံဃာတော် များကို မရိုသေ၊ မြတ်စွာဘုရားကိုမလေးစား သကဲ့သို့ သာသနာကို အာဏာအောက်တွင် ထားရှိစေချင်လွန်းသည့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာများ မှာလည်း အရမ်းကို ညံ့ဖျင်းသည့် စိတ်နေစိတ်ထား ယုတ်မာသည့် စိတ်သဘောထားများ ဖြစ်သည်ကို အားလုံး အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေကာမူ ယနေ့ မှ စတင်ပြီး ၂၀၁၀ တိုက်ဖျက်ရေး သံဃာ့ အင်အားစု အနေဖြင့် အထက်ပါ အတိုင်း ရေရှည် သားစဉ် မြေးဆက် အုပ်ချုပ် အနိုင်ကျင့်သွားမည့် အစိုးရအား အလိုမရှိပါ။ အခြေခံဥပဒေ၊ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုသည်များမှာလည်း သားစဉ် မြေးဆက်၏ အကျိုးကိုသာ ရှေ့ရှု့ဆောင်ရွက်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၁၀ တိုက်ဖျက်ရေး သံဃာ့အင်အားစု အနေဖြင့် ကျရာနေရာ ၊ ကျရာ ဒေသ မှ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုများ၊လူထုလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ကန့်ကွက် ထုတ်ဖေါ် ဆန္ဒပြသွားမည်သာ ဖြစ်သည်။
အားလုံးသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ဒကာ / ဒကာမများအနေဖြင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့နည်းတူ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်ပါတယ် ။
၂၀၁၀ တိုက်ဖျက်ရေး သံဃာ့အင်အားစု
ဆက်သွယ်ရန် - thutakarya@gmail.com
Posted by အာဇာနည် at 8:28 PM0comments
လောက်ကောင်တွေ ချီးပုံထဲက နိုးထလာနေပြီ
တည်ဆဲပါတီ ၁၀ ခုအနက် တစည ခေါ် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ NLD က မှတ်ပုံတင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ကျန် ၈ ပါတီက မည်သို့ စီစဉ်ကြမည်ကို ကြေညာခြင်း မရှိကြသေးပေ။ တစည သည် ဦးနေ၀င်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ တည်ထောင်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (၁၉၆၂-၁၉၈၈) ကို အမည်ပြောင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/127b33117e1186a9 မှ
Posted by အာဇာနည် at 8:19 PM0comments
သဟိတ်ဂ်မြို့မှာ ဘော့စနီးယားဆာ့ဘ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရာဒိုဗန်ကရာဇစ်ကို ရုံးတင်စစ်ဆေးကြားနာနေမှု က စစ်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံးတင် စစ်ဆေးကြားနာမှုအပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုအသစ်တခု ပေါ်ထွက်လာစေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တိကျတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ အဲဒီရာဇ၀တ် မှုတွေ ကို ဘာဥပဒေတွေနဲ့ စစ်ဆေးမှာလဲ။ အဲဒီလိုရာဇ၀တ်မှုမျိုး ကျူးလွန်တယ်လို့ သံသယရှိသူတဦးကို ရုံးတင် တရားစွဲဆိုဖို့ ဘယ်သူ့မှာ အခွင့်အရေးရှိသလဲ။
စစ်ရာဇ၀တ်မှုဆိုတဲ့ အယူအဆ ပေါ်လာတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကစစ်ရဲ့ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ စစ်ပွဲတွေမှာ ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိတဲ့ သဘာဝကျတဲ့ကိစ္စတွေပဲလို့ယေဘုယျ လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း နာဇီတပ်ဦးက အဓိကအားဖြင့် ဂျူးတွေဖြစ်ကြတဲ့ လူ သန်းပေါင်းများစွာတို့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု၊ ဂျပန်က စစ်သုံ့ပန်းတွေနဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် မတော်မတရား ပြုမူမှုတွေက အဲဒီလိုမျိုးရာဇ၀တ်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ သူတို့ယုံကြည်တဲ့ လူတွေကို ရုံးတင်တရားစွဲ ဆိုစေဖို့ မဟာမိတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၅ နဲ့ ၁၉၄၆ မှာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ နုရင်ဘတ်ခုံရုံး စစ်ဆေးကြားနာမှုတွေက နာဇီခေါင်းဆောင် (၁၂) ဦးကို ကွပ်မျက်စီရင်တဲ့အထိ ဦးတည်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ စစ်ဆေးကြားနာမှုတခု ၁၉၄၈ ခုနှစ်က တိုကျိုမှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ ပါတယ်။ မဟာမိတ်ခေါင်း ဆောင်တွေက ဂျပန်ဘုရင် ဟီရိုဟီတိုကို ချန်ထားခဲ့ပေမယ့် ဂျပန်စစ်ခေါင်းဆောင် (၇) ဦးကိုတော့ ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီကြားနာမှုတွေဟာ ဒီကနေ့ သဟိတ်ဂ်မြို့ ခုံရုံးက ကြားနာစစ်ဆေးနေတဲ့ အမှုတွေအတွက် အနှစ်သာရအား ဖြင့် နမူနာတွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ ခံစားနေကြရတဲ့ နိုင်ငံအစိုးရတွေကသူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
“စစ်ရာဇ၀တ်မှုသဘောတရားရဲ့ အချက်အချာ အယူအဆဆိုတာ နိုင်ငံတခု ဒါမှမဟုတ် အဲဒီနိုင်ငံက လက်နက် ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် လူတယောက်ကို တာဝန်ရှိသူအဖြစ် သဘောထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဖြစ်ပါတယ်”
အဲဒီအယူအဆနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထင်ရှားဆုံး အဖြစ်အပျက်က ၁၉၆၀ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ နာဇီတွေရဲ့ သေမင်းတမန် အကျဉ်းစခန်း တွေ ထူထောင်မှုနဲ့ ဟော်လိုကော့စ် ငရဲခန်းတွေ ဖန်တီးတဲ့ မူဝါဒတွေမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး နာဇီအရာရှိ တဦးဖြစ်တဲ့ အဒေါ့အိုက်ခမန်းကို အစ္စရေး လျှို့ဝှက်ထောက် လှမ်းရေးတွေက အဲဒီနှစ်မှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို တွေ့ရှိခဲ့ရာ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထဲက ခိုးထုတ်ပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံကို ခေါ်ဆောင်သွားကာ အဲဒီမှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးကြားနာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သူကို့ ကြိုးပေး စီရင်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီထက်ပိုပြီး နောက်ကျတဲ့ နောက်ထပ်ဥပမာတခုကတော့ ပြင်သစ်ကို နာဇီတွေ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ကာလအ တွင်းက ထိပ်တန်း နာဇီခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့သူ ကလော့စ်ဘာဘီကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးကြားနာ ခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတခု ဒါမှမဟုတ် အဲဒီနိုင်ငံက လက်နက်ကိုင်တပ်ပွဲဝင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတ ယောက် ကို တာဝန်ရှိသူအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ စစ်ရာဇ၀တ်မှု သဘောတရားရဲ့ ပင်မအချက်အခြာ အယူအဆပါ။
လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှု၊ လူသားဖြစ်မှုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှု၊ စစ်အတွင်း အရပ်သားတွေ ဒါမှမဟုတ် ရန်သူစစ်သားတွေအပေါ် မတော်မတရား ပြုမူဆက်ဆံမှု အဲဒါတွေအားလုံးဟာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုဆိုတဲ့ စကားရပ် ထဲမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အဲဒီရာဇ၀တ်မှုတွေထဲမှာ အဆိုးဆုံးက လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုပါ။
စစ်ရာဇ၀တ်မှုတခုအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ ဥပဒေစုတွေကတော့ “စစ်မက်ရေးရာ ဥပဒေနဲ့ ဓလေ့ ထုံးတမ်းတွေ” အဖြစ် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိတဲ့၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး ပိုမိုသက်တမ်းရင့်တဲ့ ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ “ဂျီနီဗာ သဘောတူညီချက်များ” နဲ့ ယူဂိုစလားဗီးယား နိုင်ငံဟောင်းအမှုကို ကိုင်တွယ်တဲ့ သဟိတ်ဂ်မြို့က “နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံး (ICTY)” အတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
စတုတ္ထမြောက် ဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်ရဲ့ ပုဒ်မ (၁၄၇) က စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို ဟောသလို ဖွင့်ဆိုထား ပါတယ်။
“လူတယောက်အား ဒုက္ခကြီးစွာ ခံစားရစေရန် တမင်ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လူတယောက် ၏ ခန္ဓာကိုယ် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအပေါ် ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာအနာတရ ဖြစ်စေရန် တမင်ရည် ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်းတို့အပါအ၀င် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း သို့မဟုတ် လူမ ဆန်စွာ ပြုမူခြင်း၊ တရားဥပဒေနှင့် မညီသော နှင်ထုတ်မှု သို့မ ဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှု သို့မဟုတ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမည့် သူတဦးအား တရား ဥပဒေ နှင့် မလျော်ညီစွာ ကန့်သတ် တားမြစ် ထားခြင်း၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ပေးထားသူတဦးအား ရန်သူ စစ်တပ်ဖွဲ့များတွင် အတင်းအကျပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်း သို့မဟုတ် ကာကွယ် စောင့် ရှောက် မှုပေးရမည့် သူတဦး၏ တရားသဖြင့် ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများနှင့် ပုံမှန်တရား ရင်ဆိုင်မှုကို ငြင်းပယ်ခြင်း” တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါလုပ်ရပ်များသည် အခြေခံအားဖြင့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုမြောက်သော လုပ်ရပ်များဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာရှေ့နေများက ပြောဆိုကြသည်။
၁၉၉၂ မှစ၍ ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင်ငံဟောင်းတွင် “စစ်မက်ရေးရာ ဥပဒေသများ သို့မဟုတ် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ” ကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူများအဖြစ် သံသယရှိသူများအား ရုံးတင်တရားစွဲဆို စစ်ဆေးကြား နာရန် မိမိတို့တွင် အခွင့်အရေးရှိသည်ဟု သဟိတ်ဂ်မြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာတရားရုံးက ပြောဆိုသည်။ ဤသို့သော စစ်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုမျိုးများအတွက် ပုဒ်မ (၃) တွင် ဥပမာများပေးထားသည်။
- ဘာသာရေး၊ ပရဟိတ၊ ကျန်းမာရေး၊ အနုပညာနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများ၊ သမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦများနှင့် အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းများကို သိမ်းပိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် တမင်သက်သက် ဖျက်ဆီးခြင်း။
- နိုင်ငံသားတစု၊ မျိုးနွယ်စုတစု၊ လူမျိုးစုတစု သို့မဟုတ် ဘာသာဝင်တစုအား ယင်းတို့ အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစိတ်တပိုင်းကိုဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြုလုပ်သော လုပ်ရပ်များအား လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုအဖြစ် ခုံရုံးက ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်သည်။
ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းအရ ယင်းသည် စစ်ရာဇ၀တ်မှုတခုမဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ ရန်သူက ၎င်းတို့အား စစ်ရေးရည်မှန်းချက်အရ အသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင် ရန်သူနိုင်ငံမှ လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ စက်ရုံများအား ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုမမြောက်ပေ။ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရန်သူအရပ်သားများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများသည် တိုက်ခိုက်သူက ရရှိသော စစ်ရေးအကျိုးအမြတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် လွန်လွန်ကဲကဲ မမျှမတဖြစ်လောက်သည့် အတိုင်းအတာအအထိ ရောက်ရှိခဲ့မှသာလျှင် ယခင်တိုက်ခိုက်မှုများအား စစ်ရာဇ၀တ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်သည့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် တညီတညွတ်တည်းဖြစ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားဥပဒေစနစ်တခု ပေါ်ထွက်လာရေးကို နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး အုပ်စုများက တောင်းဆိုနေကြသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။
ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင်ငံဟောင်းတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို ကြားနာစစ်ဆေးစီရင်ရန် ၁၉၉၃ မေတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ သဟိတ်ဂ်မြို့၌ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ “ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင်ငံဟောင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံးအပြင် ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော လူမျိုးတုံးသန့်စင်မည့် ရာဇ၀တ်မှုများကို ကြားနာစစ်ဆေးရန် တန်ဇန်နီးယာနိုင်ငံ အရူရှာမြို့တွင်လည်း နိုင်ငံတကာခုံရုံးတခုကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အိမ်နီးချင်း ဆီရာလီယွန်နိုင်ငံ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့သော စစ်ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် လိုက်ဘေးရီးယား သမ္မတဟောင်း ချာစ်တေလာကိုလည်း ခုံရုံးတခုဖွဲ့ စစ်ဆေးနေသည်။
လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ရုံးတင်တရားစွဲဆိုမည့် အမြဲတမ်း ခုံရုံးတခုအဖြစ် ၂၀၀၂ တွင် ထူထောင်ခဲ့သော နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံး (ICC) သို့ ၂၀၀၈ ဇူလိုင်လတွင် ဆူရီနမ်နိုင်ငံက (၁၀၇) နိုင်ငံမြောက် နိုင်ငံအဖြစ် ၀င်ရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထိုတရားရုံးသည် နိုင်ငံရေးသဘောပါသော ရုံးတင်တရားစွဲမှုများ ပြုလုပ်လာ နိုင်သည်ဟု အကြောင်းပြပြီး ခုံရုံးနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ရုရှား၊ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့ကလည်း အလားတူငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ယူဂိုစလားဗီးယားသမ္မတဟောင်း မီလိုဘိုဒန်မီလိုစီးဗစ် ကဲ့သို့သော တရားခံများ စောဒကတက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ ထိုသို့သော တရားရုံးမျိုးများသည် နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေသလော ဆိုသည့် မေးခွန်းမှာ အားလုံးသော တရားဥပဒေဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတ၀ိုက်တွင် ရစ်ဝဲနေသော မေးခွန်း ဖြစ်သည်။
ထိုတရားရုံးများ လုပ်ငန်းမစတင်ခင် ၎င်းတို့ကို ထူထောင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်မှာ နိုင်ငံတ ကာ၏ နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်သောကြောင့် ထိုရှုထောင့်တခုတည်းမှ ကြည့်လျှင် ထိုတရားရုံးများမှာ နိုင်ငံရေးသဘော ပါသည်ဟု ပြောနိုင်သည်။
မည်သည့်နိုင်ငံက ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ စစ်ရာဇ၀တ်မှုအားလုံးတို့အား တခုတည်းသော နိုင်ငံတကာခုံရုံး၏ တရားဥပဒေရှေ့မှောက်သို့ အရောက်ပို့နိုင်မှသာလျှင် တရားစီရင်ရေးသည် စစ်မှန်သော တရားဝင်မှုရှိလိမ့် မည်ဟု နိုင်ငံတကာတရားရုံးများအား ဝေဖန်နေသူများက ပြောဆိုနေကြသည်။ ။
မှတ်ချက်။ ။အထက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်တွင် ဘီဘီစီ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်၌ ဖော်ပြထားသည့် What isawar crime? ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Tarik Kafala ရေးသားသော ဆောင်းပါး ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by အာဇာနည် at 8:05 PM0comments
NLD ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် KNU မှ ထောက်ခံကျေငြာချက်
Support NLD's decision _burmese_
Posted by Kaw Mu Doh at 4:03 PM2comments
Posted by Kaw Mu Doh at 3:07 PM3comments
ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်)/ မတ်လ ၂၉၊ ၂၀၁၀
အိမ်ခြေ ၄ဝ ကျော် ရှိသော ဆွမ်စိဖိုရွာသို့ စစ်တပ်မှ မကြာခဏ ၀င်ရောက်လာပြီး ယခုလ အစောပိုင်းကစ၍ ရွာသားများ စတင် ထွက် ပြေးကြရာ အိမ်ခြေ ၃၅ အိမ်တို့သည် ဆွေမျိုးများ ရှိသည့် တခြားကျေးရွာဆီသို့ ထွက်ပြေးကြပြီး အချို့မှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘက်သို့ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြသည်။
“ဗမာစစ်တပ်တွေက ရွာကို ရောက်ရင် ကျနော်တို့ကို ဗမာစကားလို ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ဗမာစကားမှ မတတ်တာ ကျနော် တို့က ကိုယ့်ဘာသာ စကားတခုပဲ တတ်တယ်လေ။ သူမေးတာတမျိုး ကိုယ်ဖြေသွားတာတခြား ဖြစ်သွားတော့ ကျနော်တို့ကို ရိုက်တယ်၊ နှိပ်စက်တယ်” ဟု ဆွမ်စိဖိုရွာမှ စကားမပေါက်၍ အရိုက်ခံရဖူးသော အိမ်ထောင်ဦးစီးတဦးက ပြောသည်။
Posted by အာဇာနည် at 12:12 PM 1 comments
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ပတ်စ်ပို့) အတုများ ပြန့်နှံ့နေသည်ကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် စက်ဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်သော ပတ်စ်ပို့ များ အစားထိုးမှုကို စစ်အစိုးရက ယမန်နေ့တွင် စတင်လိုက်သည်။
ကွန်ပြူတာဖြင့်သာ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဘားကုတ်များ ဖျောက်ထားသော ပတ်စ်ပို့များ ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် ပတ်စ် ပို့ရုံး ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောဆိုသည်။
ယခု စနစ်သစ် ပတ်စ်ပို့စာအုပ် ပြုလုပ်ခမှာ ၁၉ဝဝဝ ကျပ်နှင့် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်ခ ၁ဝဝဝ ကျပ် ပေးဆောင်ရကြောင်း လက်မှတ် လျှောက်ထားသူများက ပြောဆိုကြသည်။
စနစ်ဟောင်း ပတ်စ်ပို့ လျှောက်ထားစဉ်က ဖောင်ပုံစံဝယ်ယူရာ၌ ၁၄ဝဝ ကျပ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ရာ၌ ၃၅ဝဝ ကျပ်၊ ပတ်စ်ပို့စာအုပ်အတွက် ၈ဝဝဝ ကျပ်နှင့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်ခ ၅ဝဝ ကျပ် အပါအဝင် ဖောင်တင်သော နေရာရှိ တာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်းအတွက် ကျပ် ၅ဝဝ ပေးဆောင် ရသေးသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ ပတ်စ်ပို့ရုံး အရာရှိများအတွက် လာဘ်ထိုးရသည်များရှိနေပြီး၊ ထိုသို့ မပြုလုပ်ပါက ပတ်စ်ပို့ ရရှိဖွယ်မရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by အာဇာနည် at 12:05 PM0comments
Posted by HRmyanmar at 11:47 PM0comments
ကြိုင်ကြိုင့်ရထား..ငရဲသို့ သွားရန် အသင့်ပြင်ထားသည်.
အရေးကြီးပြီ သွေးနီးကြစို့ 
U WT 30-3-2010
Posted by အာဇာနည် at 11:05 PM0comments
ဦးခိုင်ကျော်ခိုင်ဟာ ၂၀၀၇ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်းရေးမှာ ရဟန်းဘဝနဲ့ စစ်တွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အတွက် စစ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ထောင် ၂နှစ်ခွဲ ချမှတ် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ထောင်က လွတ်လာပြီး တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ထောက်လှမ်းရေးတွေက အနံ့ခံ လိုက်နေတဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းထဲမှာ မနေနိုင်ဘဲ စစ်တွေကနေပြီး ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျကို ထွက်ခွာလာခဲ့ ရသူ တဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါ ခိုင်ကျော်ခိုင်ဟာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ဖလောင်းချိတ်မြို့မှာ နေထိုင်ပြီးတော့ ကျောင်းဆရာ လုပ်နေပါတယ်။ သူ့ကို ဒီနှစ်မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင် နေတဲ့ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လို ပြောချင်ပါသလဲ လို့ နိရဉ္စရာက မေးကြည့်တဲ့အခါ သူက အခုလို စပြောပါတယ်။
ဖြေ။ ကျွန်တော်တို့ အဓိကပြောချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရခိုင် အမျိုးသားတွေဟာ နအဖ စစ်အုပ်စု လက်ထက်မှာ မကြုံဖူးအောင် အထူး ဖိနှိပ်မူတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ နေကြရ ပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးက အစ နေရာတိုင်းမှာ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ကြုံ နေကြ ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ အနေနနဲ့ ဒီရွှေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေကို မဆန့်ကျင် မကန့်ကွက်ဘူး ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ သားစဉ်မြေးဆက် စစ်ကျွန်ဘ၀က လွှတ်မြှောက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ဥပဒေအတိုင်း ကျွန်တော် တို့ ဆက်လိုက်သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ စစ်ဖိနပ်အောက်က လုံးဝလွှတ်မြောက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုး ဟာ တချိန်ခါက ကိုယ့်မင်း၊ ကိုယ့်ချင်း၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်စာပေနဲ့ နေခဲ့တဲ့ လူမျိုး တမျိုးပါ။ အခုအခါ နအဖ စစ်အစိုးရ လက်အောက်မှာ ကျွန်သပေါက် ဘဝကို ရောက်နေကြရတာဟာ တကယ့်ကို ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်ပြုမယ့် ဒီရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အနေနဲ့ ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်ပြောချင်တာ ကိုပြောလို့မရဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုလည်း လုပ်လို့မရဘူး။ တရားသဖြင့် ဆိုတာမျိုးကိုလည်း လုပ်ကိုင်လို့ မရဘူး။ အဲဒီအတွက် ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရဲဘော် ရဲဘက်တွေရဲ့ ဆန္ဒ အရ ကျွန်တော်တို့ ဒီရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမား တချို့က အခုအခါ ပါတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပြုလုပ်နေတာတွေကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ နအဖ ချမှတ်ထားတဲ့ ရွှေးကောက်ဥပဒေ၊ သူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သူတို့ ပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ အတိုင်း ရခိုင် လူမျိုးတွေ လိုက်လုပ်ရင်တော့ သူတို့ရဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်က ဘယ်တော့ခါမှ လွှတ်မြှောက် နိုင်မှာ မဟုတ်သလို ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်ပြုခံနေကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ရခိုင်အမျိုးသားမှ သူတို့ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မပါဝင်စေချင်သလို ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ လုံးဝ(လုံးဝ) ကန့်ကွက်စေချင်ပါတယ်။
မေး။ အခု ပြောနေကြတာက ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံရင် ရွေးချယ်စရာ တခြားလမ်းမရှိဘူး။ အဲဒီအတွက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်သင့်တယ်လို့လည်း ပြောနေကြသူတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ အပေါ်မှာကော ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ အတွက်က ဘာမှ မထူးပါဘူး။ ဒီရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ထောက်ခံရင်လည်း သူတို့ဆီမှာ ကျွန်ပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရင်လည်း ကျွန်သပေါက် ဘဝပါပဲ။ မဝင်ရင်လည်း ကျွန်သပေါက် ဘဝပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ခု နအဖက ပြုလုပ်မယ့် ရွှေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံရင် သူတို့ကို ကျွန်ပြုတာကို သဘောတူသလို ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ အတွက် တကယ့်ကို နစ်နာသွားစေနိုင် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘောထားက သူတို့ကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် မကြိုက်ဘူး။ သူတို့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် မင်းတို့ဘာသာ မင်းတို့ လုပ်တာ။ ငါတို့ လူမျိုးနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ မတတ်သာလို့ ငုံ့ခံနေရတာ။ သူတို့လုပ်တာကို တမျိုးသားလုံး အနေနဲ့ မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောထားကို ပြရမယ်။ ဆန့်ကျင်တဲ့ သဘောထားကို ပြရမယ်။ ဒီလို လုပ်တဲ့ အပေါ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျေနပ်ပါတယ်။ သူတို့ (နအဖ) ဆီမှာ ဒူးထောက်ပြီးတော့ အညံ့ခံပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ သဘော အတိုင်းသာ ဖြစ်သွားပါမယ်။
မေး။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ လာမယ့် နအဖ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်သူလူထု အပေါ်မှာ ဘာတွေပြောချင်ပါသလဲ။
ရခိုင်ပြည်သူ ပြည်သား အားလုံးကို ပြောကြားချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးဟာ ကိုယ့်မင်း၊ ကိုယ့်ချင်း၊ ကိုယ့်စာပေ ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နေလာခဲ့တဲ့ လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ “ရခိုင်” ဆိုတာ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ထိန်းတဲ့ လူမျိုးပါ၊ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကိုယ်ဟာ ဘာလဲ၊ ကိုယ်ဟာ ဘာလူမျိုးလဲဆိုတာကို ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ ရခိုင် ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အညီ အတူတကွ လက်တွဲပြီးတော့ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ နေထိုင် လုပ်ကိုင်ကြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကိုမင်းဆက်ခိုင် မေးမြန်းသည်။ နိရဉ္စရာသတင်း မှရယူသည်။
Posted by အာဇာနည် at 10:56 PM0comments
NLD ၏ အထူးကြေညာချက် ၀၄/၁၃/၁၀
Posted by အာဇာနည် at 10:52 PM0comments
၆၅ နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား..သန်းရွှေ ဘယ်လိုလုပ်စားနေတာကြည့်ပါ
Posted by အာဇာနည် at 6:12 PM0comments
ဒါမျိုး လိမ်လိမ်ကောက်ကောက် အ၀တ်ချည်းနှီးတွေ..မသေခင်..ကြည့်သွားပါရစေဦး..
ဘဘတို့ သည်းခြေကြိုက်..ဒါမျိုးကျ မရှိတဲ့ ဆင်ဆာ..
Posted by အာဇာနည် at 5:43 PM0comments
ဒီချုပ်ကအများဆန္ဒအတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်လိုက်ပြီ။ သန်းရွှေကလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ပြည့်တဲ့အခါ ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းတာ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေဖြုတ်ချတာ၊ ရုးံတွေပိတ်တာတွေ လုပ်ပြီး သူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို အတင်းလုပ်မှာပါ။
ကျွန်တော်တို့တတွေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ သံရုးံရှေ့မှာ ဆန္ဒပြရုံ၊ကန့်ကွက်ပါတယ်၊ တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတာလောက်နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပြင်းထန်ပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ တန်ပြန်မှုလိုပါတယ်။ ဘယ်လိုတန်ပြန်မှုနဲ့ တုံ့ပြန်ကြမယ် ဆိုတာ ခုချိန်ထဲက သုးံသပ်ပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ။
ကျွန်တော်တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်ကြသလဲဆိုတာ တပ်မတော်သားတွေကိုလည်းရတဲ့နည်းနဲ့ အသိပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ လားရှိုးမှာလုပ်သွားသလိုမျိုး တပ်မတော်သားတွေ အသွားလာများတဲ့နေရာတွေမှာ စာကပ် ပညာပေးတာမျိုး မဖြစ်မနေ လုပ်ဖို့လို့ပါတယ်။
ခုချိန်ဟာအရေးကြီးပြီမို့ လေသနတ်တွေ ဘေးချပြီး လာမဲ့ဘေး ပြေးတွေ့ရမဲ့ အချိန်ကျပြီမို့ တက်တက်ကြွကြွ၊ စည်းစည်းလုးံလုးံ၊ ထက်ထက်မြက်မြက်၊ အတွေးသစ် အမြင်သစ်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့ လို့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 5:38 PM0comments
အစက မပြောဖူးလား.အခု ဖြစ်လာပြီ..ဖွတ်ကြီးများရဲ့ သောက်ရှက်မရှိ ဖွတ်ပါတီ..
ကျော်ခ | တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၅၀ မိနစ် .
ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော်လည်း ယခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တနိုင်ငံလုံးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထား သည်ဟု သိရသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အာဏာသိမ်း နဝတ စစ်ကောင်စီက ၁၉၉၃ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အပါအဝင် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးစသည့် နအဖ ထိပ်ဆုံး စစ်ခေါင်းဆောင် ၅ ဦးက အသင်း၏ နာယကများ ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအရ အသက် ၂၅ နှစ်အောက်နှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများကို နိုင်ငံရေးပါတီဝင် မဖြစ်ရဟု ကန့်သတ် ထားရာ နုတ်ပယ်လိုက်ပြီးသည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီတွင် ပါတီဝင် မည်မျှရှိသည်ကို မသိရသေးပါ။
လမ်းပြင်၊ သောက်သုံးရေပေးဝေမှု စသော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသလို ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ရာထူးလက်ရှိ စစ်ဘက် အရပ်ဘက်များ က စည်းရုံးနေခဲ့သော်လည်း ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းအတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရာ တွင် ပါဝင်မှုနှင့် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဆန္ဒပြသူများကို ဖြိုခွင်းရာတွင် ပါဝင်ခဲ့မှုများကြောင့် ကြံ့ဖွံ့မှာ နာမည်ပျက်ထွက်သည်။
နေပြည်တော်ရှိ သတင်းရပ်ကွက်တခုက မဇ္ဈိမကို ပြောကြားရာတွင် မကြာမီ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် လက်ရှိ ဝန်ကြီးများနှင့် စစ်ဘက်အရာရှိများကို ရာထူးမှနုတ်ထွက်ကြောင်း ကြေညာလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
ဒီပဲယင်းတိုက်ခိုက်မှုမှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပါတီ NLD ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း မပြုလုပ် ရန် ယနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
Posted by အာဇာနည် at 5:23 PM0comments
လေးလေးနက် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါ တီက လေးလေးနက်နက် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါသည်
Posted by အာဇာနည် at 2:08 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် စာအမှတ် ။ ။ ၅/၂၀၁...
Posted by အာဇာနည် at 2:06 PM0comments
သူသေ ကိုယ်ရှင် တိုက်ပွဲဝင် သံချပ်များ (အိန္ဒိယ မှ သံချပ်များ)
သူသေ ကိုယ်ရှင် တိုက်ပွဲဝင်
Posted by အာဇာနည် at 1:44 PM2comments
မြန်မာပြည်ရောက်..သက်စွန့် ဆန်ဖျား သတင်းစာဆရာ
ရွှေဘဘကြီး ဒို့ မကြောက်..ဆေးတံကြီးနဲ့ခေါက်မယ်...
Posted by အာဇာနည် at 12:07 PM0comments
ရွေးကောက်ပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ခွင့် မရှိရင် ဂျပန်က စီးပွားရေးကူညီမှု ရပ်ဆိုင်းမည်
ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကိုဒေါင်းမာန်ဟုန်ဆီက ပြန်ရှယ်ယာလုပ်ထားပါတယ်။
VOA News | ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တခြား ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ထိုက်တဲ့ သူတွေ ပါဝင်ခွင့် မပေးဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ပေးနေတဲ့ အကူအညီငွေတွေ ထပ်ပေးတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကတ်ဆုယာ အိုကာဒါ (Katsuya Okada) က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရက မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အကူအညီပေးမယ်၊ မပေးဘူးဆိုပြီး ချော့တလှည့်၊ ခြောက်တလှည့် ဆက်ဆံလေ့ ရှိတာမို့ အခုလို ပြောလိုက်တာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လကမှ အာဏာရလာတဲ့ လက်ရှိ ဂျပန်အစိုးရ အနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် တကယ်ပဲ အလေးအနက်ထား ပြောဆိုတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါသလား။ အကြောင်းစုံကို နော်ရှိုးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
VOA News ကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
Posted by HRmyanmar at 11:11 PM 14 comments
NLD “ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး ကြေငြာချက် .......
“ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး ကြေညာတာက ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ချက် ၂ ခု ချလိုက်တယ်။ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ပါတီ ဗဟိုဦးစီးအစည်းအဝေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကန့်ကွက်သူမရှိ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်ပုံမတင်ဘူး။ နောက်တချက်က မှတ်ပုံမတင်သော်လည်း ပါတီကို မဖျက်သိမ်းဘူး” ဟု ရုံးချုပ်ရှေ့တွင် ပါတီခေါင်းဆောင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ပါတီလူငယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်........
ဆလိုင်းဟံသာစန်း | တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၃ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးပြီးနေက် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဆုံဖြတ်လိုက်ကြသည်။
ယုံချင်ပါဘူး..သူ့ ရုပ်ကြီးက..ဟွန်း ပြောပေါင်းများပေါ့
မြန်မာပြည်ကို ယမ်းငွေ့ တွေထဲ မထားခဲ့နဲ့ ..
Posted by အာဇာနည် at 1:13 PM0comments
ဈေးဦးဖောက်တာ..အမတ်နေရာလိုချင်လှတဲ့အေးလွင်..(ခွေးနောက်လိုက် ၂သိန်းနဲ့မြန်မာပြည်ကို ထိန်းမတဲ့)
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ပထမဆုံး စတင်လျောက်ထားသည့် ပါတီမှာအေးလွင် တို့ ရဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) ဖြစ်ကြောင်း သိရ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ပထမဆုံးစတင်လျောက် ထားသည့်ပါတီမှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂၂ ရက် နေ့က လျောက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယင်းပါတီ၏နိုင်ငံရေးပေါ်လစီမှာ တစ်ပါတီစနစ်ဖျက်သိမ်းရန်၊ ပါတီ စုံစနစ်ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် အစားထိုး တစ်ပါတီစနစ် မဖြစ်ပေါ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါပါတီကို ဦးဆောင်သူ ဦးအေးလွင်က ပြောကြားသည်။
''လက်ရှိပါတီဝင်ဦးရေက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ နှစ်သိန်းဝန်းကျင် ရှိပြီ''ဟု မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့သို့ စည်းရုံးရေးရောက်ရှိ နေသောဦးအေးလွင်က ဆိုသည်။
ယခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနည်းဥပဒေ များအရ ပါတီသစ် တည်ထောင် လို သူ သည် အနည်းဆုံး ၁၅ ဦးဖြင့် လျောက်ထားခွင့်ပြုသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဥပဒေနှင့် အညီ ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ လျောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ၌ ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လျောက် ထားပြီးသည့် ပါတီများမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) နှင့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်တို့ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
လက်ရှိ၌ နိုင်ငံရေးပါတီသစ် အဖြစ် လျောက်ထားရန် ပြင်ဆင်နေ သည့်ပါတီသစ်ပေါင်း ၁၀ ခုခန့်ရှိသည်ဟု နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရပြီး ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှ ပါတီအဖြစ်ကျန်ရှိသည့်ပါတီ ၁၀ ခု အနက် အချို့မှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လျောက်ထား ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပါတီတွင်း ဆွေး နွေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရ အဆိုပါ ပါတီများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် ဆက်လက်တည်ထောင် လိုပါက ဥပဒေစတင်ပြဋ္ဌာန်းသည့် နေ့ရက်မှစ၍ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း လျောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှ ပါတီအဖြစ်ကျန်ရှိသည့်ပါတီ ၁၀ ခု မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ် ရေးပါတီ၊ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုး သားအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ၊ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ မြို(ခေါ်) ခမိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့၊ '၀' အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီ၊ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ နှင့်ပြည်ထောင်စုကရင်အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခု NLD အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 12:49 PM2comments
မြန်မာ ပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုကြီး ရဲ့ အောင်ပွဲ နိဒါန်းကို စတင်လိုက်ပါပြီ။ လူအမြောက်အများ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့ ကို သွားနေကြပါတယ်။ တချို့ လူများက ခရမ်းချဉ်သီးများ ဘူးသီးများကိုလည်း ယူဆောင်လာကြပါတယ်။ ဗဟိုကော်မတီတွေက မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ပေါက်ရန်လို့ သိရပါတယ်။ လင့်လမ်း မှာရှိတဲ့ အလက ကျောင်းဝင်းနဲ့ကျောက်ဆည်ဓမ္မာရုံ ထဲမှာတော့ လုံထိန်းကားများကို ချထားပါတယ်။ လာရောက်တဲ့ လူထု ကလည်း ဒီထက်ကို ပိုများနေတာကအားရစရာ အလွန်းကောင်းလှပါတယ်။
လူအများက ကြောက်ရွံ့ မှုမရှိပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ်မှာ အခိုင်အမာ သံဓိဌာန် ချမှတ်ထားကြပုံရတယ်။ ဇူလှိုင် ၂၃ ရက်နေ့၁၉၈၈ ခုနစ် နေ့ က ဦးနေ၀င်း ရဲ့ မိန့် ခွန်းပြောအပြီးမှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးနဲ့ တုန့် ပြန် လို က်တဲ့ နေနဲ့ အလားသဏန် တူနေတယ်လို့၈၈ မျိုးဆက် ဟောင်း တဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒီတခါတော့ နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲ မြန်မာ ပြည် ပြောင်းလဲ ရပြီပေါ့ဗျာလို့ကျောင်းဆရာ တဦးက ကြုံးဝါး သွားပါတယ်။
တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ရဲ့ စီစီအဖွဲ့ဝင်အများစုက မှတ်ပုံမတင်ရေးဘက်ကို ၀ိုင်းထောက်ခံနေကြတော့ ဦးအောင်ရွှေနဲ့ တချို ခေါင်းဆောင် အ နည်းစု က မဲမခွဲရဲတော့ပဲ မန်းဒိတ်တွေ သုံးမယ် လုပ်နေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အမတ်တွေက သူတို့ပေးထားတဲ့ မန်းဒိတ်တွေကို ပြန်ရုပ် သိမ်းကြတယ်။ မှတ်ပုံတင်ရေးမှာ သူတို့တင်ရေးမှာသူတို့ မန်းဒိတ်ကို သုံးခွင့်မပေးနိင်တော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
တကယ်လို့မှတ်ပုံမတင်ရေးဖက်ကနိင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တနေ့ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ကြီးကို တဆက်ထည်း ဆက်လည် ဆင်နွဲရပါ လိမ့်မယ်။ ၂၀၀၈ အတုယောင်အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ၀င်ရပါလိမ့်မယ်။
Posted by အာဇာနည် at 12:47 PM0comments
သတ္တိကြောင်သူနှင့် သတ္တိပြောင်သူများ ရွေးထုတ်ပွဲ
ဘာတွေပဲ ပြောပြော၊ ဘာတွေပဲဆိုဆို မဝေးတော့သည့် ကာလ တစ်ခုတွင် သတ္တိကြောင်သူနှင့် သတ္တိ ပြောင်သူများကို ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူများ သဲကွဲပြားနား ခြားနားစွာ တွေ့မြင် ရပေတော့မည်။ နအဖ စစ်အာဏာရူး တစ်စုက သွေးခွဲ သပ်ရှို မီးမွှေးပေးလိုက်တာကို NLD ပါတီအနေနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင် ကျော်လွှား ဖြေရှင်း သွားမလား၊ နအဖ ခင်းပေးသည့် စင်းတုန်းပေါ် အသာအယာ လည်စင်း ခံမလား ဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင် လူထု ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ဆန္ဒ သဘောသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာ ကြက်ငှက်ရွေးပွဲ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖာတစ်လုံး ခေါင်းကြား ရွေးပွဲလို့ ပြောရင် ပိုပြီး မှန်ကန် သင့်တော်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါက နအဖရဲ့ ကလိင်ကကျစ် တစ်ဖက်သတ် လုပ်ရပ်၊ ပြောစရာ မလို လောက်အောင်ပင် ကန်းကုန်အောင် ရက်စက် ယုတ်မာရန် ကြိုတင် ကြံစည်ပြီးသား။ ဒါကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ဖို့က NLD နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူတို့ တာဝန်၊ တွေဝေစရာ မလို၊ ခေါင်းစား စရာမလို၊ သတ္တိကြောင်ဖို့ မလို၊ သတ္တိပြောင်ဖို့သာ လိုအပ်ပေသည်။ နအဖကို စာသံပေဖွဲ့ အနူးအညံ့ အလှအပတွေနဲ့ ပြောဆို လုပ်ကိုင်လို့ မရ၊ အနှစ်(၂၀)က သက်သေရှိတယ်။ အမှတ် သည်းခြေ မရှိတဲ့ ဗမာတွေ အဖြစ်နဲ့ နောက်ထပ် အနှစ်(၁၀၀) စစ်ကျွန်ခံ ကြအုံး မလား၊ ရုန်းထွက် မလား ဆိုတာကတော့ NLD နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး၊ ဒါက ရာဇ၀င်တွင်မဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ သမိုင်း။
ထောင်ဆိုတာ သမိုင်းရဲ့ ပြတိုက် တစ်ခု၊ ထောင်ကြောက် နေလို့ မဖြစ်၊ ထောင်ကြောက်ရင် စစ်အာဏာရှင် သက်ဆိုး ရှည်မည်။ ထောင်မကြောက်ရင် စစ်အာဏာရှင် သက်ဆိုးတိုမယ် ဒါက ၂၀၁၀ ရဲ့တစ်ခုတည်းသော အဖြေ။ သတ္တိကြောင်သူများ အတွက် ဒီမိုကရေစီသည် ထိုက်တန်သော ဂုဏ်ပုဒ် မဟုတ်၊ ဒီမိုကရေစီသည် သတ္တိ ပြောင်သူများ အတွက်သာ ထိုက်တန်သော ဂုဏ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြောက်စိတ်၊ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ မတရားဖိနှိပ်မှု အချိုးခံ၊ အနှိမ်ခံ၊ အဖိနှိပ်ခံ နေရသည့် စိတ်တွေကို သတ္တိအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်မှာ လူထု ခေါင်းဆောင် များ၏ အရေးကြီးသော တာဝန် တစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။
NLD ပါတီ မှတ်ပုံမတင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ခဲ့လျှင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ၊ ပါတီရှိဖို့မလို နိုင်ငံရေးရှိဖို့လိုသည်။ နိုင်ငံရေး သေမသွားအောင် ဘယ်နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုကြမလဲ ယခုကတည်းက စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိရတော့မည်။ ကြောက်ရင် ပိုပြီးတော့ ဖိနှိပ်တယ်၊ ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေး မလုပ်ဖို့ နအဖက တားမြစ်တယ်၊ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပိတ်ပင်တယ်၊ နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူး၊ စိတ်မ၀င်စားဘူး ဆိုတဲ့လူတွေ အနှစ်(၂၀) ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ၊ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံး ခွေးမဖြစ်ရုံတစ်မယ်ပဲ၊ စစ်ကျွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ စစ်ခွေးတွေ အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်တာကို လူနဲ့သူနဲ့ မတူအောင် ခံခဲ့ရတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့တယ်။ ဘာရုပ်မှ ပေါက်မလာခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် နိုင်ငံရေး လုပ်ကြရမယ်၊ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး လုပ်ကြရမယ်။ နအဖ အာဏာရူးတွေ ပြောတာကို လိုက်လုပ် နေလို့ ဘာတစ်ခုမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်၊ အပြတ်တော်လှန်ကြရမယ်။ မြန်မာပြည်စစ်ကျွန်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ၂၀၁၀ မှာ အပြီးသတ် တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲ ဆင်နွဲ ကြရပါမယ်။ NLD ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်သူတွေ မဆင်နွဲရင် နအဖက အပြီးပိုင် ဆင်နွဲ ပါတော့မယ်။ဒါကိုအထူးသတိပြုကြပါ။ တော်လှန်ရေး အင်အားစုများ၊ တော်လှန်ရေးမအင်အားစုများအားလုံး ယခုအချိန်ကစလို့ မြန်မာပြည် စစ်ကျွန် အောက်ကလွတ်မြောက်ရေး အတွက် အုပ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်ကစလို့ စုပေါင်း ပါဝင် ဆင်နွဲကြဖို့ အချိန်ကြရောက် နေပါပြီ။
နွားအဖွဲ့၊ လူစိတ် သူစိတ် မရှိသူများ စုဝေးထားသည့် လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့၊ ပြည်သူလူထုကို ထင်းတိုင်းကြဲ နှိပ်စက်နေသည့် လိုင်စင်ရ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့၊ NLD ဆိုတာ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရဟန်းရှင် လူပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးက လုံးဝဥဿုံ အကြွင်းမဲ့ အာဏာ အပ်နှင်း ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည်၏ တစ်ခုတည်းသော ဒီမိုကရေစီ ရှေဆောင် လမ်းပြ ပါတီ အဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ် ပေးရမယ်၊ တိုင်းပြည် အကျိုးကို ရှေ့ရှုပြီး အနစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ဆောင် ကြရမယ်။ ရန်သူက ပြတ်သား တာကို အောင်မလေး အော်နေလို့ မဖြစ်၊ အော်နေရမည့် အချိန် မဟုတ်တော့၊ တိုက်ပွဲအသွင် လမ်းကြောင်း ပြောင်းသင့်ချိန် ရောက်လာလျှင် ပြောင်းရမည်။ တိုက်ပွဲ ခေါ်ရမည်။ လူထုရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အမည်ခံထားပြီး ဝေတေတေ လေတေတေ လုပ်နေ ကြဦးမည် ဆိုပါက ခရစ်နှစ် ၃၀၀၀ ပြည့်သော်လည်း ဒီမိုကရေစီရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ယခုအချိန်အခါသည် သတ္တိကြောင်သူနှင့် သတ္တိပြောင်သူ ရွေးထုတ်ပွဲ အဖြစ် မဝေးတော့သည့် ကာလတွင် ထွက်ပေါ် လာတော့မည် ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၀ တော်လှန်ရေး အသွင်သစ်ဖြစ် စစ်အာရူး ခွေးသူတောင်းစားများ အဖွဲ့ကို အမိမြေပေါ်မှ အပြီးပိုင် ဖယ်ရှားပစ်ရန် အချိန် ကြရောက်လာပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း တော်လှန်ရေး သစ္စာဖြင့် အသိပေး လိုက်ရပါသည်။
Posted by ဒီရေ at 9:09 AM0comments
ကျွန်တော်တို့ လဖစတ (AAMD) - Burma အင်အားစုမှ (စပရေး)မှုတ်ဆေးအနီတွေနဲ့ မန္တလေးမြို့ပေါ်အနှံ့ နံရံတွေပေါ် FREE, FREE Su Kyi, FREE Daw Su, FREE 2010, FREE Aung San Su Kyi, ရွေးကြက်ခြေခတ်(ရွေးကောက်ပွဲအလိုမရှိ) အစသဖြင့် လိုက်လံရေးသားကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး၊ ၂၀၀၈
နာဂစ်အခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
မှုတ်ဆေးတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ပေါ် နေရာတွေကတော့ မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးချုပ်နံရံတွေ၊ TTC (ပညာရေးကောလိပ်), နန်းရှေ့၊ ရွှေကျောင်းကြီး၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အရှေ့ဘက် ၆၉ လမ်း၊ ဗောဓိကုန်း၊ ၆၂ လမ်း၊ ၆၄၊ ၆၅ လမ်း သိပ္ပံလမ်း၊ မြို့သစ်၊ လမ်း ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၆၊ ၈၇ လမ်းတွေ နဲ့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးပတ်ဝန်းကျင်၊ ရွှေကျီးမြင်ဘုရားပတ်ဝန်းကျင် အစသဖြင့် ၀င်းနံရံ၊ တံခါးဝ၊ အုတ်ခုံ၊ ရေကန်၊ ဓမ္မာရုံနံရံအစသဖြင့်တွေပေါ်မှာ ဆေးနီစပရေးဘူးနဲ့ လိုက်မှုတ်ရေးခဲ့ကြပါတယ်။
အလားတူဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမျိုးတွေကို အခြားနယ်၊မြို့များမှာလည်း မပြတ်တမ်းဆက်လက် ဆင်နွှဲကြဖို့ အလေးအနက်ထားတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ခွေးတွေ အပင်းဆို့ ဖို့ တော့ ဒို့ မကြွေးနိူင်
ရွေးကောက်ပွဲ ဒေါ်စုပါဝင်ခွင့် မရှိရင် ဂျပန်က စီးပွားရေးကူညီမှု ရပ်ဆိုင်းမည် 28 March 2010
Posted by အာဇာနည် at 11:55 PM0comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ စစ်အစိုးရပြန်ဌာန်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်သင့် မ၀င်သင့်ဆိုတာကို လာမယ့်မတ်လ ၂၉ ရက် တနင်္လာနေ့မှာ ဒီပါတီဌာနချုပ်မှာပဲ စည်းဝေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 11:54 PM0comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ၏ အနာဂတ် ဘာလဲ ဘယ်လဲ
အောင်ဇော် Saturday, March 27, 2010
လူအများ ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကို လွန်ခဲ့သည့်သတင်းပတ်များအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် သူ၏ အာဏာပလ္လင်အား တဦးဦးဖြင့် လူစားထိုးမည်လော သို့မဟုတ် ယခုအတိုင်းချန်လှပ်ထားခဲ့မည်လော ဆိုသည်ကို မြန်မာ့အရေး လေ့လာ စောင့်ကြည့် သုံးသပ်နေသော ပညာရှင်က၀ိများ အနေဖြင့် အပူတပြင်း စဉ်းစားတွက်ချက်နေကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အနေဖြင့် သူ၏နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုနှင့် ကိုင်စွဲထားသော အာဏာကိုလိုလိုလားလား စွန့်လွှတ်ပါ့မလား ဆိုသည့် အချက်ကတော့ လူအများအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေသည်။
နေပြည်တော်မှ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရသော သူများ၏ အဆိုအရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သည် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ကာလတွင် သမ္မတရာထူးနေရာ၌ ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အစီအစဉ်များ ရှိနေသည်ဟု တပ်မတော်အတွင်းမှ အရာရှိတချို့က ယုံကြည်နေကြသည်။ သို့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် ကုလသမဂ္ဂအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်ကာလက သူ့အနေဖြင့် မကြာခင် အနားယူ တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခဲ့သေးကြောင်း သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
နေပြည်တော်မှာ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနှင့် အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများ၏ အဆိုအရ တပ်မတော်အတွင်းရှိ အချို့ အုပ်စုများအနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးအား ကာလသတ်မှတ်ချက် အပိုင်းအခြားမရှိဘဲ အာဏာကိုဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားရန် ဆန္ဒရှိနေကြပြီး နောက်ဆုံးအချိန်အထိ တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွား ရန် တိုက်တွန်းမှုများ ရှိနေသည်ဟု ကြားသိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေဖြင့်လည်း တပ်မတော်အတွင်းရှိ အုပ်စုတချို့မှ ထိုသို့တောင်းဆိုလာသည့်အပေါ် ခေါင်းညိတ်သဘောတူကာ သမ္မတကြီးလုပ်ဦးမည်ဆိုလျှင်လည်း မည်သူမျှ အံ့သြ လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကောလဟာလများအရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် စစ်အစိုးရအတွင်းမှ တတိယ မြောက် အာဏာရှိသူ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းအား ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ကာလ အတွက် သမ္မတ ရာထူးပေးအပ်ရန် လျာထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းနှင့် ဇနီးတို့သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အပါအ၀င် ၎င်း၏မိသားစုဝင်များနှင့် အလွန်နီးစပ်သူများ လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုမိသားစု နှစ်စုသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ အတူတကွ အမြဲဈေးဝယ်ထွက်ကြကြောင်းလည်း သိရှိရသည်၊
သို့သော်လည်း စစ်တပ်အတွင်းမှလာသော သတင်းများအရ သူရရွှေမန်းသည် ယခုအခါ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် မလိုအပ်တော့ ကြောင်း ကြားသိရပြန်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် ယခင်က ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းမှူး ဖြစ်ခဲ့ သည်။ ထိုနေရာမှ ရန်ကုန်ရှိစစ်ရုံးချုပ်သို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားပေးခဲ့ခြင်းသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ် အစောပိုင်း နှစ်များ အတွင်း ရေပန်းစားခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်အား ပြန်၍ အားပြိုင်နိုင်စေရေးအတွက် ခန့်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု သိရှိရသည်။ အာဏာလက်စောင်းထက်လှသော ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် တဖြစ်လဲ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တခုလုံးနှင့်အတူ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ် ခံလိုက်ရ သည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် သူ၏ ပြိုင်ဖက်များအတွင်းမှ အန္တရာယ် အရှိဆုံးသူ တဦးကို ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြှောက်စားခဲ့သော၊ ရာထူးတင်ပေးခဲ့သော လူလတ်ပိုင်း စစ်အရာရှိ များထဲမှ တဦး ဖြစ် သည်။ ထိုအရာရှိများသည် တပ်မတော်အတွင်း ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများ ဖြစ်လာသကဲ့သို့ ၀န်ကြီးများအဖြစ်လည်း ရာထူးများ ရရှိခဲ့ကြ သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်၊ အထူးစစ်ဆင်ရေးဗြူရို အမှတ် (၅)၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ၊ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦး တို့သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စင်တင်ပေးခဲ့သော ထိပ်တန်း အရာရှိများ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးသည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ဥက္ကဌ တာဝန် ကိုလည်း ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသည် မန်မာနကြီးသူတဦး မဟုတ်သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ယုံကြည် စိတ်ချမှုကို အပြည့်အ၀ရရှိသူ တဦးမဟုတ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိတ်ချယုံကြည်သော ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း၂၀၀၇ ခုနှစ်၌ ကွယ်လွယ်အပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ စိတ်ကြိုက် ထိပ်တန်းအရာရှိများ ဖြစ်လာ ခဲ့ကြသည်။
အကယ်၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလအပြီးတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်နှင့် သူ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အာဏာ နေရာကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲ ထားမည်ဆိုပါကလည်း အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်များသည် နိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင် ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံခြားငွေ အမြောက်အများရှိနေ သကဲ့သို့ မက်မော ဖွယ်ကောင်းသော စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကိုလည်း တဖက်တွင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပိုင်ဆိုင် ထား ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ တဦးချင်း ချမ်းသာ ၍ ဓနကြွယ်ဝလာမှုများသည် လာမည့်နှစ်အတော်များများအထိ ဆက် လက် အကျိုးခံစား နေရဦးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ဤနေရာတွင် မေးရမည့်မေးခွန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် မည်သည့်နည်းနာကို သုံးစွဲ၍ သမ္မတကြီးအဖြစ် အာဏာ ကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်မည်နည်း ဆိုသည်ပင်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်အရ စစ်တပ်သည် ဖြစ်တည်လာမည့် အစိုးရသစ် အုပ်ချုပ်ရေးထဲတွင် ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၊ ခရိုင် ဒေသကြီးများ စသဖြင့် အဆင့်တိုင်းတွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း နေရာကို အလိုအလျောက် ရရှိမည်ဖြစ်သည်၊ ထို့အပြင် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် တဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်တဦးနှင့် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းအတွက် စစ်တပ် ကိုယ်စား လှယ် တဦး စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးကို သမ္မတရာထူးအတွက် လျာထားသည်။
လာမည့် အနာဂတ်၌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအား ထိုကိုယ်စားလှယ်များထဲမှတဦးဦးအဖြစ် တပ်မတော်မှ ကိုယ် စားလှယ်များက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းမည် ဆိုပါက တင်သွင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အသစ်ဖြစ်လာမည့် သမ္မတသည် အမျိုးသားကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ထမ်း ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြေညာ နိုင်သကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း ဖျက်သိမ်း နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသည်။
လက်ရှိတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်၏ အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး အာဏာ ရှိသူဖြစ်သည်။ ထိုရာထူးကို သူ စိတ်ချယုံကြည်ရဆုံး သူကိုသာ လွှဲပြောင်းပေး လိမ့်မည်ဟု လေ့လာသုံးသပ်သူ များက ဆိုထားသည်။ အသက် ၅၀ ကျော်ခန့်ရှိသော ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေသည် ထိုရာထူးအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးသူ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်ကြေးပေးနေကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် ညွှန်ကြားချက်များ အမိန့်များ ဆက်လက်ပေးနေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန် မန္တလေး တို့တွင် ထိပ်တန်းစစ်အရာ ရှိများနှင့် နိုင်ငံရေး၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် ကျင်းပသော ပုံမှန်အစည်း အဝေးများကို ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍ ညွှန်ကြား နေရသူကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းသာဖြစ်သည်။
မည်သူသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်မည်နည်းဆိုသည့် မေးခွန်းက ယခုအချိန်တွင် အရေးကြီးနေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ယုံကြည်စိတ် အချရဆုံးဖြစ်၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ဇနီးနှင့်နီးစပ်သော ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေကတော့ အဆိုပါရာထူးအတွက် ယနေ့ အချိန်တွင် တစ်ပြေးနေ တဦးဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် နောက်တချက်ရှိသေးသည်။ ခေတ်မီ၍ အားကောင်းသည်ဟု ယူဆထားသည့် တပ်မတော်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီး အနေဖြင့် အခြားသူ တဦးဦးလက်ထဲသို့ ထိုးအပ်ရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ သူ၏ တပ်မတော် အတွင်းမှ ထိပ်တန်းအရာရှိများအကြားတွင် ရှိနေသည့် အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုများ အကြောင်းကို သူ ကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းကောင်းသိသူ တဦးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စစ်တပ်ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရာထူးကို စွန့်ခွာလိုက်ပါက နောင်တွင် စစ်တပ်ကိုပြန်လည် ထိန်းချုပ်ရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲနိုင်ပါမည်။ ထိုအချက်သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် စိုးရိမ်သောက အရောက်ရဆုံး ကိစ္စဖြစ်နိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင် တွေ့မြင်နေရသည့် အပြောင်းလဲများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဟု ဆိုပါစို့။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် စိုးရိမ်သောကဖြစ်စေရသည့်အချက်မှာ သူ့ထက် အသက်ငယ်ရွယ်သော စစ်တပ်နှင့် ၀န်ကြီး အဖွဲ့များထဲမှ လူလတ်ပိုင်း ထိပ်တန်း စစ် ခေါင်းဆောင်များသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထိုလူလတ်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များသည် ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်း တရိပ်ရိပ် ဖြင့် ပိုမိုချမ်းသာ ကြွယ်ဝလာကြသကဲ့သို့ ပို၍လည်း အာဏာလက်စောင်း ထက်လာကြသည်ကို တွေ့ရှိရသောကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအား ညသန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် အိပ်မက်ဆိုးဖြင့် လန့်နိုးစေသူ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်ဆိုသော စစ်အရာရှိများသည် သူကိုယ်တိုင်နှင့် သူ၏ မိသားစုလုံခြုံရေးကို လာမည့်အနာဂတ် ကာလတွင် အာမခံနိုင် မခံနိုင် ဆိုသည်ကသာ အမှန်တကယ် မေးရမည့် မေးခွန်း ဖြစ်သည်။
ရှေ့အနာဂတ်တွင်လည်း သူ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေဖြင့် များစွာသော ထိပ်တန်း စစ်ခေါင်း ဆောင် များကို ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခြင်း အကျယ်ချုပ် ချထားခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ကာကွယ်ရင်း နေထိုင် သွားရ ပေလိမ့်မည်။ ထိုအထဲတွင် သူနှင့်သူ့မိသားစုနှင့် အစေးမကပ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် သည်လည်း တဦး အပါ အ၀င်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော အချက်များကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် ထွက်တော်မူနန်းကခွာခြင်းသည် သူနှင့်သူ့မိသားစု အတွက် အန္တရာယ်များ လှသော ကြောင့် တနည်းနည်းဖြင့် အာဏာကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲခြင်းကသာ အကောင်းဆုံး ဗျူဟာဖြစ်တော့သည်။
အကယ်၍ ဤသို့မဟုတ်ဘဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိတ်ပြောင်းလာသည် ဆိုပါစို့။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ် ဌေးဦး တို့အတွက် ထိပ် တန်းရာထူးများက အဆင်သင့် ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။
အလားတူပင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေအား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် စိတ်လေး နေသည်ဆိုပါက သူ့အ နေဖြင့် ရွေးချယ်ရန် လူလတ်ပိုင်း ထိပ်တန်းအရာရှိများ ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ် လှဌေးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ကိုကို၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေနှင့် ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဆွေတို့ ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။
လောလောဆယ် အနေဖြင့် သမ္မတကြီးဖြစ်ရန် ရည်စူးနေပုံရသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကံကောင်းပါစေ ကြောင်း စကားပါးလိုက်ရပါသည်။
Than Shwe Mulls his Future Role By Aung Zaw ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြ ပါသည်။
Posted by အာဇာနည် at 11:40 PM0comments
(သာသနာတော်ကို စစ်ကျွန်အဖြစ်နွံ့ နစ်မခံကြပါနဲ့)အ...
စက်ဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်သည့် ပတ်စ်ပို့များ စတင်ထုတ်ဝေ...
ကြိုင်ကြိုင့်ရထား..ငရဲသို့ သွားရန် အသင့်ပြင်ထားသည်...
နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် ဝါရင့် ရခိုင် နိုင်ငံရေးသမား...
၆၅ နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား..သန်းရွှေ ဘယ်လ...
ဒါမျိုး လိမ်လိမ်ကောက်ကောက် အ၀တ်ချည်းနှီးတွေ..မသေခင...
အစက မပြောဖူးလား.အခု ဖြစ်လာပြီ..ဖွတ်ကြီးများရဲ့ သော...
လေးလေးနက် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါ တီက လေးလေးနက်န...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီ...
သူသေ ကိုယ်ရှင် တိုက်ပွဲဝင် သံချပ်များ (အိန္ဒိယ မှ သ...
ရွေးကောက်ပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ခွင့် မရှိရင် ...
ယုံချင်ပါဘူး..သူ့ ရုပ်ကြီးက..ဟွန်း ပြောပေါင်းများေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အမြ...
(ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ကို ဝန်းရံကြ )
ဘယ်သူကမွေးလို့ဘယ်သူကကြွေးလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ တပ်မ...
ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ မြန်မာစစ်သံမှူးအိမ်ရှေ့က တရားမျှတ...
သံသရာ မဆိုင်းတဲ့ အမှု..
ဆာဒန်လိုသေတွင်းထဲ အောင်းရတော့မဲ့ သန်းရွှေ
၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ(၂ရ)ရက်။(၆၅)နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လ...
မကွေးတိုင်း NLD မှ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် သဘော...
“ လူငယ်တွေဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ တိတိကျကျအလုပ်ကို လ...
NLD လူငယ် အစည်းအဝေးကနေ ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်...
ခေါ်လိုက် မခေါ်လိုက် သူတို့ တွေဘဲ အညှိုးညှိုးလုပ်နေ
ဒို့ ဘုန်းဘုန်းများ ရဲသကို..
ဘုန်းဘုန်းတို့မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
မဲရုံကို သွားကြပါစို့(ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကြပ်ကြပ...
မကွေးတိုင်းNLD အဖွဲ့ သားများ၏ ရပ်တည်ယုံကြည်ချက်
ထောင်ခါဖို့အချိန်ကျပြီ..နအဖတွေ အတွက်..ထောင်အသင့်...
ငါပြောသလိုလုပ်..ငါလုပ်သလို့ မလုပ်နဲ့ ..
ရှက်ရမလား..ဂုဏ်ယူရမလား..ဒါလားဟဲ့ ဒို့ မြန်မာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခွင့်ပြုဖို့...
Compilation of 2010 NLD Statements.
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သို့ အကြံပြုတင်ပြတို...
25th Mar 2010 - MoeMaKa Daily
လွှတ်တော်မခေါ်လို့ နစ်နာမှု NLD လျှောက်ထား
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး...
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာ အာရုံလွှဲမှု ဖြစ်တယ်
အမေရိကန် ဗုဒ္ဓေါဝါဒ ဆရာတော်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွ...
ကော့မှူး၌ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး သံသယဖြစ်ဖွယ် ကျီးကန်းမျာ...
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ လူ (၂) သိန်းခန့် သောက်သုံးရေအခက်...
မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဝမ်းရောဂါ ဖြစ်ပွား
မိုးဦးကျ မှိုလို ပေါက်လာတဲ့ ပါတီများ
အော်..နအဖ လက်ထက် အားလုံးဒုက္ခ...၀တွေ လည်းစစ်ပြေးဒုက...
အစစ်တွေကထောင်ထဲ အတုတွေက တဖြဲနှစ်ဖြဲ ဟဲ့အေးလွင်..မင...
နေပါပါတော့ ခွေးသေ ၀က်သေ..
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (...
ဇကလေးတွေ ပေါ်လာကြပြီ..မှန်းနေတာ..ထမင်းရည်အိုးကွဲ အမ...
ကျားနဲ့လင်းတ..လယ်ပြင်မှာ..တွေ့ နေပြီ
ရှင်ဘုရင်သံလျှက်ခိုးတော့ ၀န်မင်းက သူခိုးဘယ်သူသိပါရ...
23th Mar 2010 - MoeMaKa Daily
ဒို့ ဗိုလ်ချုပ်ကမှာခဲ့တယ်...ရရင်ရ..မရရင် ချဖို့ 
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ယနေ့ ထုတ်ပြန်သော အ...